NY MPIASA MALAGASY SY NY ADY AMIN’NY COVID-19 - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
Araka ny didim-panjakana laharana:2020-370 noraisin’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny 04 Aprily 2020, dia nohalavaina ary mbola mitohy manankery manerana ny tany Repoblikan`ny Madagasikara mandritry ny tapa-bolana hatreto, ireo fepetra noraisina noho ny fahamehana ara-pahasalamana tamin’ny didim-pitondrana Laharana: 2020-359 tamin’ny 21 marsa 2020.
Ho fanatsarana ny fiarovana ny mponina sy ho fanampiana azy ireo hanaja ny fepetra fihibohana, dia nasiana ny fandaminana vaovao eny amin’ny fokontany mba hanamorana ny fizarana fanampiana ho an’ny olona/fianakaviana marefo, ary koa ny fepetra fahazoan’ny olona mamonjy ny tany niahaviany sy ny ankohonany.
Tsapa anefa fa mihamavesatra hatrany ny fahasahiranana isan-tokatrano, noho ny fikatsoan’ny toe-karena amin’ny ankapobeny ka mampitaraina ny olona noho ny fihenan’ny fidiram-bola.
Eo amin’ny tontolon’ny Asa, dia misy ny orinasa – izay tena vitsy dia vitsy – miezaka manaja ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika momba ny tsy fanaovana chômage technique sy ny fitsinjovana ara-pahasalamana ny mpiasa ary noho fahasahiranan’ izy ireo amin’ny fitaterana sy ny fivezivezena.
Na dia eo aza ny fanamaivanana ny vesatry ny orinasa amin’ny fampiatoana ny fandoavan-ketra, ny fandoavana ny vola fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa ary ny trosa amin’ny banky, ny ankamaroan’ny orinasa dia manampy trotraka sy manararaotra ny fahasahiranan’ny mpiasa amin’ny fandroahana tsy ara-dalana sy ny fanaovana ramatahora sy jadona amin’ny mpiasa, indrindra ny fanosihosena ny zon`ny mpiasa amin’ny endriny samihafa, na izany eto an-dRenivohitra na any amin’ny Faritra. Mibaribary ny tsy firaharahiana ny baikon’ ny Fitondrana, ny fanararaotana ny tsy fanajana ny zo fototry mpiasa ary ny tsy fahavononana hametraka sehatra ifampidihina.
Koa satria ny olona no loharanon-karena voalohany indrindra amin’ny fampiodinana ny toe-karena, ary izy ireo no maha-Firenena ny Firenena, ny FISEMA dia :
Mihevitra fa tokony tsy hisy tombo sy hala ny fiarovana ny olom-pirenena amin’izao valan’aretina Coronna Virus izao; indrindra eo amin’ny fanomezana tohana sy ny fitsinjarana ny fanampiana azo avy amin’ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka. Ny ankamaroan’ny mpiasa mpikarama dia tsy misitraka ny asa mendrika ary maro no voasokajy ho olona/fianakaviana marefo;
Miantso ny Fitondram-panjakana – indrindra ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Vola sy ny Ministera misahana ny Asa sy ny Lalana Sosialy – handray andraikitra ka hampanaja an-tsakany sy an-davany ny fifanarahana nataony tamin’ny vondron’ny Sehatra tsy Miankina tamin’ny 23 MARS 2020, sy ny toromarika fiarovam-pahasalamana, araka ny naoty laharana 027-MTEFPLS/2020 tamin’ny 26 MARS 2020;
Mangataka ny Ministera misahana ny Asa sy ny Lalana Sosialy hampamory ny Filan-kevim-Pirenena momba ny Asa handinihina dieny izao ireo fepetra tokony horaisina aorian’ny valan’aretina;
Mankahery ny Mpiasa tsy an-kanavaka sy ny Vahoaka Malagasy amin’izao sedra mafy lalovan’ny Firenena izao ary mampirisika azy ireo hanaja ny toro-marika amin’ny fiarovana ny fahasalamana.
Antananarivo, faha-8 APRILY 2020
Jean Gualbert RAVONJIS JOSE RANDRIANASOLO